Wararka - Faa'iidooyinka xirmooyinka qalliinka ee la tuuro
Xidhmada Hawlgalka OEM & ODM
Xidhmada Labiska & Xirmooyinka Habka Yar
Polymers Sare ee Suuxinta
Alaabta aan tollayn lahayn
Koob muunad caag ah oo la tuuro
Weelka dhiiga faaruqinta ee la tuuro
Tuubbada saamiga fayraska la tuuro
Faa'iidooyinka xirmooyinka qalliinka ee la tuuro
Faa'iidooyinka Xirmooyinka Qalliinka La Tuuro
1. Waa ammaan, ku habboon oo dhaqaale leh. Xidhmada qalliinka ee aan la samayn karin ee la tuuri karo ayaa ka samaysan dhar caafimaad oo tayo sare leh oo aan tayo lahayn, kharashka guudna wuu hooseeyaa.
2. Waxay leedahay hawsha ilaalin labalaab ah, taas oo kaliya ka ilaalinaysa bukaanka infakshanka, laakiin waxay kaloo hubisaa in shaqaalaha caafimaadku aysan ka noqon doonin caabuqa, oo aad u ammaan badan.
3. Qalabka qalliinka ee aan la tollayn waa mid jilicsan oo neefsan kara, kaas oo bukaanka ka dhigi kara inuu dareemo raaxo inta la isticmaalayo, sidoo kale wuxuu ka hortagi karaa gelitaanka dareeraha, taas oo si wax ku ool ah u hagaajin karta raaxada bukaanka isla markaana yareyn karta heerka caabuqa ee qalliinka kadib.
4. Agabka bay'ada u fiican ee loo adeegsado xirmooyinka qalliinka ee aan la tollayn way fududahay in lagu maareeyo marka la farsameeyo.
1. Xoojinta tirada hawlgallada xarumaha caafimaadka. Waqtiga diyaarinta agabka iyo waqtiga ururinta agabyada kala duwan.
2. La tuuri karo: Badeecadani waa badeecad hal mar la isticmaalo, oo dib looma isticmaali karo ka dib markii la kala firdhiyey. Waxay nuugi kartaa dhammaan agabyada qashinka inta lagu jiro qalliinka bukaanka hal mar, taasoo si wax ku ool ah uga hortageysa is-qaadsiinta.
3. Fududeyn: qalliin fudud, adeegsi hal-lakab ah oo shukumaan dalool leh, si sahlan loo faafi karo, sheyga waxaa lagu nadiifiyey oksiten oxide ka hor inta uusan ka bixin warshadda, waxaana si toos ah u adeegsan kara hay'adaha caafimaadka iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo qalab kala duwan oo jeermis ah madhalaysnimada Iyo madhalaysnimadu waxay hagaajisaa hufnaanta shaqada ee hay'adaha caafimaadka.
4. Nabadgelyada: Goobta aragga ayaa ah mid nuujinaysa, dhiigga iyo dareerayaasha kale ee soo ifbaxa qalliinka ka dib si dhakhso ah ayaa loo nuugaa, si hawl -wadeenku u yeesho goob muuqaal oo cad, taas oo ku habboon qalliinka oo hagaajinaysa nabadgelyada inta qalliinka lagu jiro.
1. Badeecadaha waa in loo kala habeeyaa siday u kala horreeyaan dhakhtarka qalliinka
2. Alaabta qashinka ka dib isticmaalka waa in loola dhaqmaa si wadajir ah
3. Badeecadu waa in lagu kaydiyo meel hawo leh oo qalalan si looga fogaado taabashada walxaha daxalka leh sida aashitada iyo alkaliinka
4. Badeecadu waxay shaqeyneysaa 3 sano laga bilaabo taariikhda wax soo saarka
Waqtiga boostada: Jun-08-2021
HENAN ZHANCHENG COMPANY TRADING COMPANY waxaa la aasaasay 2016 wuxuuna ku yaal Zhengzhou City, Gobolka Henan, saldhigga ugu weyn eisai ee adduunka ...
Qolka D26, No.25 dhisme, No.23 waddada changchun, degmada tiknoolajiyadda sare, magaalada zhengzhou, gobolka henan, Shiinaha